Shelleng - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Shelleng bụ ọchịchị ime obodo nke Adamawa Steeti, North-east Naijiria. Ọchịchị ime obodo nwere oke na Guyuk na Girei LGA yana obodo na obodo nta dịka Kiri, Bodwai, Gundo, Jumbul, Shelleng, Timbu, Ketembere, Dunge, Boburo na Tallum. Ọchịchị ime obodo Shelleng nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ 190,671 bi na mpaghara ahụ mejupụtara ndị otu agbụrụ dị iche iche dịka fulani, Lala, kana kuri, kiri, na Bura. Asụsụ Bura bụ otu n'ime asụsụ ndị a na-asụ na Shelleng LGA ebe okpukperechi nke uka na ndi na akpo isi ala na-emekarị na mpaghara ahụ. Mmeme ndị a ma ama na Shelleng LGA gụnyere mmemme Mendamo ebe ihe ama ama na mpaghara ahụ gụnyere Kiri Dam na ụlọ ọgwụ Shelleng koteji.
Ọchịchị ime obodo Shelleng na-ekpuchi mkpokọta 1,359 square kilomita ma nwee nkezi okpomọkụ nke 32 degrees centigrade. Ọ dị n'akụkụ ọdọ mmiri Chad ma nwee osimiri Kiri na Gongola na-asọfe na mpaghara ya.
Ịkụ azụ na ịzụ anụmanụ bụ ọrụ akụ na ụba dị mkpa na Shelleng LGA na anụ ụlọ dịka ehi, ewu, ebule, na ịnyịnya na-azụ ma na-ere ya n'ọtụtụ ebe. LGA bụkwa ebe obibi nke ngalaba azụmaahịa na-amasi ike yana LGA na-anabata ọtụtụ ahịa ebe a na-azụ ma na-ere ngwa ahịa dị iche iche. Ọrụ akụ na ụba ndị ọzọ nke ndị Shelleng LGA na-eme gụnyere ịchụ nta, ite na ịrụ ọrụ aka. Ọchịchị ime obodo Shelleng na-anabata Kiri Dam nke a na-enye mmiri maka ọrụ ugbo na mpaghara ahụ.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Shelleng&oldid=73095
Last edited on 24 Ọnwa abụọ 2022, at 11:33
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 24 Ọnwa abụọ 2022, mgbe 11:33